Auphonic: Manatsara ny audio Podcast anao amin'ny Click-iray | Martech Zone
Auphonic: Manatsara ny audio Podcast anao amin'ny tsindry iray
Zoma, Martsa 17, 2017 Alatsinainy, Septambra 4, 2017 Douglas Karr
Rehefa nanangana ny Fiarahamonina Martech, fantatray fa sarobidy ho an'ny tambajotram-mpamaky anay ny manavao sy mizara ny fahalalana azony. Rehefa nanoratra momba ny audio podcast aho, Temitayo Osinubi nizara fitaovana mahatalanjona antsoina hoe Auphonic. Raha tsy injenieran'ny feo ianao, dia mety ho lahasa goavambe ny fanovana ny feon'ireo podcast anao. Ary ny fitaovana fandraisam-peo toa tarika garazy aza manome be amin'ny fomba fitaovana fanatsarana - mila mahafantatra fotsiny hoe inona ireo fahaiza-manao.
Temitayo dia nanondro ahy ny làlan'ny Auphonic, fampiharana miorina amin'ny tranokala sy birao izay manatsara ny harenany sy ny haben'ny audio podcast anao. Ny teknolojia dia afaka manara-dalàna mihitsy aza ny làlan-tokana misy ny mpandahateny iray avo kokoa noho ilay iray hafa… mahatalanjona tokoa. Nomeko fitsapana iray ity niaraka tamin'ny iray amin'ireo rakipeoko ary avy hatrany dia voahidy aho ary nividy ireo rindranasa birao rehetra - ny iray ho fanatsarana ny làlan-tokana ary ny iray ho fanatsarana làlana marobe.
Fanamarihana: Nitafatafa tamiko tao amin'ny podcast i Temitayo ary fotoana nahafinaritra izany - mihaino eto.
The Levelup Auphonic dia manan-tsaina Desktop Batch Audio File Processor izay manadihady ny feonao ary manitsy ny tsy fitoviana eo amin'ny samy mpandahateny, ny mozika sy ny kabary ary ny anton-drakitra feo maro mba hahatratraranao ny feon'ny feo mifandanja.
Ahitana a Marina fetra farany, tanjona kendrena Fitsipika avo (EBU R128, ATSC A / 85, Podcasts, Mobile, sns.) Ary mandeha ho azy Fihenan'ny tabataba sy Hum algorithma.
Ny Level Auphonic dia azo alaina ao amin'ny Mac OS X 10.6+ (64bit) aryWindows 7+ (32bit na 64bit).
Auphonic Multitrack maka lalan-tsofina fampidirana marobe, mamakafaka sy manodina azy ireo tsirairay ary koa mitambatra ary mamorona ho azy ny fifangaroana farany. Ny leveling, ny famoretana, ny gating, ny tabataba ary ny fihenan'ny hum, ny fanesorana crosstalk, ny ducking ary ny sivana dia azo ampiharina mandeha ho azy araka ny famakafakana ny lalana tsirairay. Ny normalisation amin'ny feo avo sy ny fetra farany fetra dia ampiasaina amin'ny fifangaroana farany.
Auphonic Multitrack dia namboarina ho an'ny fandaharana anjakan'ny kabary ary azo alaina ho an'ny Mac OS X 10.6+ (64bit) ary Windows 7+ (32bit na 64bit).
Ny sasany amin'ireo endri-javatra fanitsiana feo dia misy:
Adaptive Leveler: Ny Adaptive Leveler dia mandanjalanja ny fiovaovan'ny fanamafisam-peo, ka mahatonga ny lalana manontolo ho mafy kokoa ary ho maro kokoa.
Sivana avo lenta: Ny High Pass Filter dia manala ireo haavo ambany manelingelina mandritra ny làlana.
Fihenan'ny tabataba sy Hum: Ity endri-javatra ity dia manala ny rakitsary avy eo amin'ilay lalana, na dia misy fiovaovana aza. Ity endri-javatra ity dia manala tanteraka ny tsipika herinaratra hum avy amin'ny firaketana.
Crossgate: Isaky ny voarakitra ao anaty microphone roa samy hafa io feo io dia tsy mampiasa afa-tsy ilay lalana manjakazaka io fampiasa io Crossgate dia miasa ihany koa mba hamafana tanteraka ny tabataban'ny akony.
Izaho dia nampiasa fampiharana roa be dia be ary tokony homarihina fa tsy manao fahagagana izy ireo. Nanana humotra avo lenta aho tao amin'ny podcast iray ary indrisy, nanitatra izy io nefa tsy nohafohezina rehefa avy nandalo azy io. Na izany aza, tiako tanteraka io fitaovana io ary nanana valiny tsy nampino aho hatramin'izay! Misaotra an'i Temitayo!
Tags: Adaptive Levelerfanatsarana feoauphonicleveler auphonicprocesseur multitrack auphonicCrossgateSivana avo lentaiTunes levelfitaovana itunesmultitrackFihenan'ny tabataba sy Humfitaovana podcasttemitayotemitayo osinubifitaovana boky
Mino aho fa tafahoatra ny fahombiazan'ny haino aman-jery sosialy B2B
Ahoana ny fomba fandraisam-peo Audio Premium Quality amin'ny alàlan'ny Internet